Bogga FAQ - Aragtida Cradle
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah FAQs oo aan u maleynay inay waxtar u leeyihiin qof kasta oo ka yaabban boggayaga. Waxaan hiigsaneynaa inaan ka farxinno dhammaan akhristayaashayada, haddii aad wax cabasho ah naga qabto, kanaalkayaga YouTube ama boggan, waxaad mar walba nagula soo xiriiri kartaa bogga xiriirka oo aad sugto jawaabtayada. Waxaan hiigsaneynaa inaan ku soo jawaabno 24 saacadood gudahood. Ha ka welwelin haddii aan wax badan sii qaadano.
Maxay yihiin ujeedooyinka bloggaaga? - In aan dadka u sheegno taxane animated gaar ah oo aan ka dhiibanno ra'yigayada ku saabsan noocyadan taxanaha ah. Tani waa ujeeddadeenna oo kaliya, wax kale ma hiigsaneyno.
Xogtaadu ma saxbaa / la aamini karaa? - Dhammaan macluumaadkayaga waxaan ka soo aruurineynaa ilaha internetka ee dadweynaha, waxaana ujeedadeedu tahay inaan hubinno in dhammaan macluumaadka aan helno ay yihiin 100% xaqiiqo ah. Caadi ahaan waxaanu eegnaa shaqooyinka iyo PA-yada qorayaasha anime iyo fanaaniinta.
Fikradaada ma u xaglinaysaa noocyada anime qaarkood? – Dhab ahaantii maya. Waxaan bixinaa aragti cad oo la cusboonaysiiyay al anime ee aan la kulanno, waxaan si rasmi ah u cadeyneynaa inaanan eex lahayn.
Intee in le'eg ayaad qorshaynaysaa inaad samaysato blog-yo sidan oo kale ah? – Inta aan rabno. Waxaa jira dhowr qof oo kale oo lagu maalgeliyay goobtan sida aniga oo kale. Hadafkayagu waa inaan sii wadno ahaansho aamin ah, wax ku ool ah, madadaalo waxtar leh oo la jecel yahay been abuur boggaga taxanaha kale ee jecel noocaan oo kale.
Ma taqaan meelo wanaagsan oo lagu daawado anime online? sharci darro ah mise sharci? – Haa, waxaanu soo jeedinaynaa Funimation, oo leh maktabad weyn, laakiin aan lahayn wax badan oo heersare ah. Doorasho kale oo sharci ah ayaa noqon doonta CrunchyRoll. In kasta oo aanan lahayn CrunchyRoll waxaan aragnaa xayeysiisyo badan oo iyaga ah markaa waa inay lahaadaan kuwo wanaagsan. Midka kale waxaan u soo jeedineynaa Kiss Anime. Ka digtoonow, in KA ay tahay goob fiidiyoow ah oo budhcad-badeed ah oo ay ku martigeliyaan fiidiyowyada budhcad-badeedda ee boggooda iyada oo loo marayo habka Bit Torrent. Ma dammaanad qaadayno isticmaalka goobta, waxaanu ku ogeysiinaynaa inuu jiro. Haddii aad ka timid UK tusaale ahaan waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho https://kissanime.ru hana isku mashquulin inaad VPN ku socodsiiso halkaas isku mar, ma shaqayn doonto oo kuma oggolaan doonaan inaad gasho goobta.
Ma bilaabi doontaa dhawaan dib u eegista? - Haa, waxaanu bilaabi doonaa samaynta dib u eegis iyo sidoo kale "5-yada ugu sarreeya" dhawaan. Waxaan kaliya sugeynaa wax markaas waxaad filan kartaa inaad ku aragto boggayaga.
Goorma ayaa waxyaabaha cusub ee YouTube la heli doonaa? – Aad ugu dhakhsaha badan. Waxaan soo deyn doonaa (waxaan rajeyneynaa) muuqaal cusub toddobaad kasta. Waxa kale oo laga yaabaa inaan ku samayno "5ta xaraf ee ugu sarreeya" YouTube iyo sidoo kale cod dheer. Wali waanu go'aansanayna in kastoo, sug uun, way iman doontaa.
Siidayntaada iyo qiyaasahaa taariikhaha siidaynta sax ma yihiin? - Waxaan jecelnahay inaan u maleyno inay haa yihiin. Waxaan hiigsaneynaa inaan aruurino (waana ku kalsoonahay inaan sameyno) waxyaabaha ugu xaqiiqada dhabta ah ee boostada blog kasta sida ugu macquulsan. Tani waxay noqon doontaa yoolkeena sanadaha aan rajeyneyno.